Abavelisi beZiko leMveliso | Kwiziko leMveliso lase China iFektri kunye nabaXhasi
Inkqubo yokuHamba kweGPS
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yenkqubo yokukhangela ye-GPS esetyenziselwa motocycle. Umzi mveliso weemoto uneemfuno ezingqongqo kakhulu malunga nokusebenza kunye neenkqubo, umgangatho kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Zonke ezo zinto ziphambili kwaye zisentliziyweni yemithetho yokusebenza kwe-Asteelflash, kwihlabathi liphela. Njengenkampani ye-elektroniki yeemoto kunye nomenzi wePCBA oomatshini, thina, ePandawill, sihambisa iinkonzo ezikumgangatho ophezulu kubunjineli, uyilo kunye neprototyping.
Ikhamera yezemidlalo yangaphandle
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yemveliso yekhamera yezemidlalo yangaphandle. I-elektroniki yabathengi, ukusuka kwiimveliso ezimanyelwayo ukuya kwizinto ezinxitywayo, umdlalo okanye inyani yokwenyani, zonke ziya zixhuma ngakumbi. Umhlaba wedijithali esihlala kuwo ufuna inqanaba eliphezulu loqhakamshelwano kunye nezinto ze-elektroniki eziphambili kunye nezakhono, nokuba zezona zilula kwiimveliso, ukuxhobisa abasebenzisi kwihlabathi liphela.
I-telemetry yexesha lokwenyani labasebenzi
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB ye-Real-time telemetry esetyenziselwa abasebenzi. I-elektroniki yabathengi, ukusuka kwiimveliso ezimanyelwayo ukuya kwizinto ezinxitywayo, umdlalo okanye inyani yokwenyani, zonke ziya zixhuma ngakumbi. Umhlaba wedijithali esihlala kuwo ufuna inqanaba eliphezulu loqhakamshelwano kunye nezinto ze-elektroniki eziphambili kunye nezakhono, nokuba zezona zilula kwiimveliso, ukuxhobisa abasebenzisi kwihlabathi liphela.
Inkqubo yemiqondiso yedijithali
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yenkqubo yophawu lwedijithali. Uphawu lwendlu yedijithali lubekwe ngaphandle komnyango wendlu kwizitepsi. Izinyuko azinomxholo ongaguquguqukiyo kuphela, kodwa ukumakisha amagama xa kushukunyiswa kuye kwaququzelelwa ngokubonakalayo xa onke amanqaku okumakisha enokuphathwa ngokuthe ngqo kwi-intanethi.
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yenkqubo yesikhululo somnyango. Thina, ePandawill, siziingcali kwiinkonzo zokwenza imveliso smart ekhaya. Enkosi kwiifektri zethu ezikrelekrele, iinjineli zethu kunye noomatshini basebenzisa uhlalutyo olukhulu lwedatha, ikhompyuter yelifu, ubukrelekrele bokufakelwa (i-AI) kunye noshicilelo lwe-3D ukwenza izixhobo ezixhumeneyo zekhaya elifanelekileyo.
Ukusuka kuyilo kunye nebhodi yokuvelisa ye-PCB ukuya kwiinkonzo ze-NPI kunye nezisombululo zokuphelisa imveliso ukuya kuthi ga esiphelweni, iifektri zethu ezikrelekrele zinokuzisa izisombululo zekhonkco zonikezelo kubathengi bethu, kuzo zonke izixhobo zabo zekhaya.
Inkqubo yolawulo yokubonisa i-LED
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yenkqubo yokubonisa i-LED. Thina, ePandawill, siziingcali kwiinkonzo zokwenza imveliso smart ekhaya. Enkosi kwiifektri zethu ezikrelekrele, iinjineli zethu kunye noomatshini basebenzisa uhlalutyo olukhulu lwedatha, ikhompyuter yelifu, ubukrelekrele bokufakelwa (i-AI) kunye noshicilelo lwe-3D ukwenza izixhobo ezixhumeneyo zekhaya elifanelekileyo.
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yenkqubo yolawulo lwendlela yokubona uloliwe. Umzi mveliso wecandelo lezentengiselwano ibiyinxalenye yecandelo eliphambili ebelisebenza yiPandawill kodwa ngoku singqina i-Intanethi yeZinto, ngokujolisa ngqo kwi-Intanethi ye-Intanethi yeZinto (i-IIoT), eya kuthi izise unxibelelwano kunye nokuzenzekelayo kwimizi-mveliso nakwiinkampani ezijikeleze umhlaba.
Ibhodi yolawulo lokuqhutywa kwemiqondiso
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yokulawulwa kwebhodi yolawulo. Umzi mveliso wecandelo lezentengiselwano ibiyinxalenye yecandelo eliphambili ebelisebenza yiPandawill kodwa ngoku singqina i-Intanethi yeZinto, ngokujolisa ngqo kwi-Intanethi ye-Intanethi yeZinto (i-IIoT), eya kuthi izise unxibelelwano kunye nokuzenzekelayo kwimizi-mveliso nakwiinkampani ezijikeleze umhlaba.
Isixhobo sokufumana idatha ye-IoT
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yesixhobo sokufumana idatha ye-IoT. Ukusuka kwiinkonzo zobunjineli kunye nezeemveliso ukuya kwindibano yebhodi yesekethe eprintiweyo, thina, kwinkampani yePandawill EMS, sizisa izisombululo zobungcali kwizixhobo ze-Intanethi zezinto.
Isixhobo sokuphilisa i-Laser
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB yesixhobo sokuphilisa i-laser. Indawo yokubonisa ye-ISO 13485 eqinisekisiweyo ixhasa iimfuno zakho zokuvelisa kwenye yezona mveliso zingqongqo: amandla ethu oNyango agubungela uluhlu olubanzi lwamacandelo athile ukusuka kwizixhobo zokuchonga ukuya kwizixhobo eziphathwayo, ukusuka kwindibano yeebhodi zesekethe eziprintiweyo (PCBA) ukuya kwindibano yeemveliso ezigqityiweyo.
Ibhodi ye-Ultrasound ibhodi yonyango yeger